မြေကြီးက ရွှေသီးခြင်းကုို တလွဲအဓိပ္ဗယ်ဖော်သူများ ~ Htet Aung Kyaw
9:20 AM Htet Aung Kyaw No comments
The Voice Daily. 22 April, 2015.
ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မြေကမ္ဘာနေ့မှာ ကမ္ဘာမြေစိမ်းလန်းစုိုပြည်ရေး ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင် ကြဖုို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချစ်မြတ်နုိုးသူတွေက လှုံဆော်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာတုိုက်ကြီး ခြောက်ခုစလုံးရှိ မြို့ကြီးအတော်များများမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး ပညာပေးအခမ်းအနားတွေ လုပ်မယ်လို့သိရတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့အသိုင်းဝုိုင်းဆီပြန်ဝင်ဖုို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီမုိုကရေစီပြုပြင်င်ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်းပေါ်က မြန်မာနုိုင်ငံရဲ့မြို့တော် နေပြည်တော်မှာလည်း ဒီလုိုအခမ်းအနားလုပ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်ကစလုို့ ဒီလုိုအခမ်းအနားတွေ စတင်ကျင်းပလာတာဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့်ကတော့ တနေ့ထက် တနေ့ ပုိုဆုိုးလာနေတဲ့ လေထု၊ ရေထု၊ မြေထု ညစ်ညမ်းမှုတွေကို အများပြည်သူ သတိပြုလာစေဖုို့၊ ကာကွယ်နုိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှာနုိုင်ဖုို့ဖြစ်တယ်လုို့ လှုံ့ဆော်ရေးမှုးတွေကပြောပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ကတော့ အဖွဲ့လုိုက်ဖြစ်စေ၊ တဦးချင်းဖြစ်စေ ဒီနေ့မှာ သစ်ပင်စိုက်တာ၊ လမ်းဘေး တလျောက် အမှိုက်ရှင်းတာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးချတာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်း အောင်လုပ်ပေးတာ၊ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုကိုတားဆီးပေးဖုို့၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုတားဆီးပေးဖုို့ အစိုးရဆီ စုပေါင်းလက်မှတ်ထုိုးတောင်းဆုိုတာတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
တကယ်လို့ နေပြည်တော်မှာ အခမ်းအနားကျင်းပဖြစ်ရင် ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။ သစ်ပင်စုိုက်မှာလား၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုအတွက် သမ္မတဆီကန့်ကွက်စာပို့မှာလား၊ မြေယာသိမ်းမှုအတွက် ကန့်ကွက်စာပို့မှာ လား။၊ နေပြည်တော်ကုိုယ်နှိုက်က သိမ်းပုိုက်ထားတဲ့မြေတွေပေါ်မှာ၊ သစ်ပင်တွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး အသစ်စက်စက်ဆောက်ထား တာဆုိုတော့ ပြောရခက်သား။
ဧပြီလဟာ ဥရောပနဲ့အနောက်ကမ္ဘာမှာ နွေဦးရာသီ၊ သစ်ပင် ပန်းပင်တွေ စိမ်းလန်းစရာသီဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာနုိုင်ငံမှာက နွေလယ်ရာသီ၊ အပူအုိုက်ဆုံး၊ ရေအရှားပါးဆုံးရာသီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချိန်မှာ သစ်ပင်စုိုက်ဖုို့တော့ လွယ်မယ်မထင်ပါ။ မုိုးဦးစရာသီ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးနေ့မှာတော့ မြန်မာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချစ်မြတ်နုိုးသူတွေ သစ်ပင်စုိုက်လေ့ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
(မြန်မာနုိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသက သစ်တောပြုန်းတီးမှုတခု၊ ဓာတ်ပုံ-Global Witness)
ဒါပေမယ့် စုိုက်တဲ့အပင်နဲ့ ခုတ်တဲ့အပင် ဘယ်ဟာက အရေအတွက်ပိုများသလဲ၊ စုိုက်တဲ့နေရာနဲ့ ခုတ်တဲ့နေ ရာ ဘယ်ဟာက ဧရိယာပုိုကျယ်သလဲ၊ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်း-အဖွဲ့တွေအပါဝင် အာဏာပုိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက စုိုက်တာနဲ့ ခုတ်တာမှာ ဘယ်ဖက်မှာ ပုိုအားသန်သလဲဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Global Witness အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရဆုိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ သစ်တော တွေကနေ ခုနစ်မီနစ်မှာ သစ်ကားတစီးနှုန်း တရုတ်နုိုင်ငံထဲခုိုးဝင်နေပါတယ်။ တစီးမှာ ၁၅ တန်၊ ၇ မီနစ်မှာ တစီးနှုန်းနဲ့ ၂၄ နာရီပတ်လုံးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တရက်တည်းမှာတင် တန်ချိန် ၃၀၀၀ ခန့် တရားဝင်ခုိုးထုတ်နေတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။
အခု ၂၀၁၅ မှာကော အခြေနေတွေတုိုးတက်လာပြီလား။ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပုိုင်း ရန်ကုန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ် ထုိုးပွဲလုပ်နေစဉ် ကချင်ဖက်မှာဖြစ်တဲ့တုိုက်ပွဲဟာ ‘’တရုတ်ဖက်က ၀င်လာတဲ့ သစ်ခုိုးကားတွေကို လေယဉ်နဲ့ဗုံးကျဲတာပါ’’ ဆုိုတဲ့ပြောဆုိုချက်၊ အဲဒီမတုိုင်လေးမှာတင် တရုတ်နုိုင်ငံသားတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပါတဲ့ သစ်မှောင်ခုိုဂုိုဏ်း ဖမ်းဆီးမှုသတင်းတွေက တရုတ်နယ်စပ်ရှိ သစ်မှောင်ခုိုလုပ်ငန်း အရင်ထက်တောင် ပိုဆုိုးလာနေတယ်ဆုိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်။
ဒါဖြင့် တခြားဒေသတွေ၊ တနုိုင်ငံလုံးအခြေနေတွေကကော ဘယ်လိုရှိသလဲ။ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စုိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေအရ ၁၉၉၀ ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ့ သစ်တောဧရိယာ စတုရန်းမုိုင် ၃ သောင်းခန့်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရစဉ်က မြန်မာနုိုင်ငံ ဧရီယာရဲ့ ၇၀ ရာခုိုင်နှုန်းကိုသစ်တောဖုံးလွှမ်းနေပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် အကျော်မှာတော့ ၄၀ ရာခုိုင်းနှုန်းသာကျန်တော့တယ်လုို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Global Witness အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ မြန်မာနုိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ဒေသတခုတည်းမှာတင် စစ်တပ်နဲ့ခရုိုနီတွေကသိမ်းပုိုက်ခဲ့တဲ့မြေဧက ၅ သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၀၆ ကနေ ၂၀၁၃ ကာလအတွင်းရရှိတဲ့စာရင်းတွေဖြစ်ပြီး ဒီမြေတွေကို စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီ အခကျေးငွေနဲ့ပြန်လည်ငှားရမ်းနေတယ်လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။
(နေပြည်တော်က သိမ်းပုိုက်ခံ မြေယာတခု။ ဓာတ်ပုံ-ထက်အောင်ကျော်)
အရှေ့မြောက်ဒေသတခုတည်းမှာတင် သိမ်းပုိုက်ခံမြေဧက ၅ သန်းရှိတယ်ဆုိုရင် တနုိုင်ငံလုံးအတုိုင်းအတာ နဲ့ဆုို ဘယ်လောက်များရှိနေလေမလဲ။ လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက စနစ်တကျစာရင်းပြုစုတင်ပြနုိုင်တာ မျိုး မရှိသေးတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှအတိအကျမသိနုိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျေးလက်ဒေသကုိုဆင်းပြီး ရွာတုိုင်း ရွာတုိုင်းက လူတွေကုို မေးကြည့်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ လယ်ယာ၊ ဥယျဉ်အသိမ်းမခံရရင်တောင် ရွာပြင် ကနွားစားကျက်တွေ၊ မြေလွတ်မြေ ရုိုင်းတွေကို စစ်တပ်နဲ့ခရုိုနီက သိမ်းခဲ့တာချည်းပါပဲ။
ဒီလုိုမြေသိမ်းမှုအပေါ် လူပြောများလာတဲ့အတွက် စစ်အစိုးရခေတ်က သိမ်းခဲ့တဲ့မြေတချို့ကို မူလပုိုင်ရှင်ဆီ ပြန်ပေးပါ့မယ်။ ပြန်လုိုချင်သူတွေ လျောက်လွှာတင်ကြပါဆုိုပြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ လွှတ်တော်တွင်းမှာလည်း မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် တပ်မတော်က သိမ်းထားတဲ့မြေတွေထဲက လောလောဆယ်အသုံးမပြုတဲ့မြေဧက တသိန်းခွဲကျော် (၁၅၉,၄၅၀ ဧက) ကုို မူလပုိုင်ရှင်တွေဆီ ပြန်ပေးမယ်လို့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တဦး က လွှတ်တော်အတွင်း ကတိပေးခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပုိုင်းမှာတော့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ သမ္မတ ဦးညဏ်ထွန်းကုိုယ်တုိုင် ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မဲ့ မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟုိုကော်မီတီဆုိုတာပေါ်လာပါတယ်။ ဒီကော်မီတီရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မြေယာမြေအမှုပေါင်း ၇ ထောင်နီးပါး (၆၈၇၀) ကို ၂၀၁၄ အတွင်း စစ် ဆေးစုံစမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပါဝင် အခြားဌာနအသီးသီး၊ ကုပ္ဗဏီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ သိမ်းပုိုက်မြေတွေ ထဲက ပြန်လည်စွန့်လွှတ်မြေ ဧက ၁ သိန်းခွဲ (၁၄၁ ၁၅၄ ဧက) ကုို မူလပုိုင်ရှင်တွေဆီ လွှဲပြောင်းပေး အပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ထပ်လွှဲပြောင်းပေးဖုို့ ဧက ၁ သိန်း ၆ သောင်းကျော် ( ၁၆၁ ၀၄၇ ဧက) ကျန်နေ ဆဲဖြစ်ကြောင်း အဲဒီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်က ဖေါ် ပြပါတယ်။
ရှေ့မှာညွှန်းဆုိုခဲ့တဲ့ Global Witness ရဲ့အစီရင်ခံစာအရ အရှေ့မြောက်ဒေသ တခုတည်းမှာတင် ဧက ၅ သန်းလောက် အသိမ်းရတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆုိုရင် အစိုးရကပြောတဲ့ တနုိုင်ငံလုံးမှ ဧက ၃ သိန်းကျော်ပဲ ပြန်ပေးမယ်ဆုိုတာ အတော်နည်းနေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင် ပြန်ပေးမဲ့မြေ ပမာဏကိုပဲ ထုတ်ပြောပြီး သိမ်းထားတဲ့မြေပမာဏကုိုတော့ သတင်းထုတ်ပြန်ဖုို့ ထိမ်ချန်ထားဆဲလုို့ပြောနုိုင်ပါတယ်။
ထားတော့။ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမုိုကရေစီစနစ်ဆီ ချီတက်နေတာဆုိုတော့ တခြားနုိုင်ငံက တင်းပြည့်ဒီမုိုကရေစီလုို ပြည်သူ့အခွင့်အရေး ၁၀၀ ရာခုိုင်နှုံးပေးဖုို့ တောင်းဆုိုလုို့ မဖြစ်နုိုင် သေးပါ။ တရားဥပဒေ စုိုးမုိုးမှုက စနစ်တကျမရှိသေး၊ လူဟောင်းနဲ့ လူသစ်က သိပ်မကွဲပြားသေးတဲ့အချိန်မှာ အတင်းအဓမ္မမြေသိမ်းသူတွေကို အပြစ်ကျုးလွန်သူတွေအဖြစ် မြေအသုံးချမှုကော်မီတီက မမြင်မိသေးတာ ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်တော့ ဒီလူတွေကို အပြစ်မပေးနုိုင်သေးရင်တောင် ဒီလုိုအဓမ္မသိမ်းမိတဲ့ အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်းလေးလောက်တော့ မြေသိမ်းခံရတဲ့ လယ်သမားတွေဆီ တောင်းပန်သင့်တာပေါ့။
အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်။ အပြစ်ကျုးလွန်သူကို အရေးမယူနုိုင်တဲ့အပြင် သိမ်းထားတဲ့မြေများစွာထဲက တချို့တ၀က် ပြန်ပေးတာကုိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမလုိုလုိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာမဲ့ အခြေအနေ၊ လူဆုိုးတွေကို ချော့ပြီးပေါင်းနေရတဲ့ အခြေနေမှာ မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်က ရပ်တန့်နေဆဲပါ။
မြေကြီးက ရွှေသီးခြင်းကို တလွဲအဓိပ္ဗယ်ဖော်သူများ
စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကနေ ဒီမုိုကရေစီခေတ်ဆီ ပြောင်းလဲနေပြီလုို့ ဘယ်လုိုပဲနှုတ်ကနေပြောနေပါစေ၊ စစ်ယူနီဖောင်းနေရာမှာ တုိုက်ပုံနဲ့ပုဆုိုးဝတ်ထားတာကလွဲရင် အခုအုပ်ချုပ်နေသူတွေနဲ့ အရင်စစ်အစိုးရ ခေတ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့သူတွေဟာ ဒီလူဒီလူတွေပါပဲ။ လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေမရှိသေးသရွှေကတော့ အာဏာရှိသူတွေနှုတ်ကထွက်သမျှဟာ ဥပဒေကဲ့သုို့ အာဏာတည် သောအမိန့် ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါ။
(နေပြည်တော်က လယ်သမားတဦး- ဓာတ်ပုံ-ထက်အောင်ကျော်)
ခရုိုနီခရုိုပြာနဲ့ အခွင့်အရေးသမားတွေကလည်း အာဏာရှိသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်စားနေကြဆဲပါ။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်အပါဝင် အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေက မြေကွက်တွေကိုကြည့်လုိုက်ပါ။ ဘယ်သူ တွေပုိုင်သလဲ။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ဈေးကြီးနေတာလဲ။ မြန်မာနုိုင်ငံကမြေကြီးက ရွှေထက်တောင်ဈေးကြီး နေတယ်ဆုိုပြီး နုိုင်ငံခြားသားတွေ ဘာကြောင့် ငြီးညူနေကြတာလဲ။
အဖြေကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ မြေကြီးက ရွှေသီးတယ်ဆုိုတဲ့ စကားပုံကုို ခရုိုနီ၊ ခရုိုပြာတွေက အာဏာ ပုိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အဓိပ္ဗယ်ပြောင်းလုိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကုိုယ့်မှာရှိတဲ့မြေကွက်ကုို စနစ်တကျပြုပြင်ပြီး သစ်သီးဝလံစုိုက်ပျိုးမယ်ဆုိုရင် ၀င်ငွေရပြီး ချမ်းသာလာနုိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မူလအဓိပ္ဗယ်ဟာ အခု ခရိုနီခေတ် ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီလုိုအချိန်ကုန် လူပင်ပန်းခံပြီး တနှစ်လုံးစုိုက်ပျိုးနေစရာမလုိုတော့ပါ။
အာဏာပုိုင်တွေဆီက အမိန့်စာတစောင် ရအာင်တောင်း (ငွေပေး၊ လာဘ်ထုိုးပြီး) ပြီး အကွက်အကွင်းကျတဲ့ မြေတွေကိုအရင်သိမ်းလုိုက်ပါ။ သိမ်းလုို့မရရင် အောက်ဈေးနဲ့ရအောင် ခြိမ်းခြောက်ဝယ်လုိုက်ပါ။ တနှစ်၊ နှစ်နှစ်အတွင်း မူလတန်ဖုိုးထက် ဆယ်ဆမက အမြတ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကုို မြေကြီးကရွှေသီးခြင်းလုို့ ဒီနေ့ခရိုနီတွေက ယူဆထားပုံရပါတယ်။ ဒါဟာ မြို့ပြဒေသမှာတင်ဖြစ်နေတာ လားဆုိုတော့ မဟုတ်သေး။ ကျေးလက်က လယ်ယာမြေတွေ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေ၊ ဟိုး နယ်စပ်တကျောရှိ တောင်တန်းတွေပါမကျန် နှစ်ဖက် လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ခရုိုနီတွေက ပုိုင်ဆုိုင်ထားလုိုက်ကြပြီ မဟုတ် ပါလား။
မြန်မာနုိုင်ငံရဲ့လက်ရှိ ဥပဒေအရ ‘’မြေပေါ်မြေအောက် သံယံဇာတအားလုံးကို နုိုင်ငံတော်မှပုိုင်သည်’’ လုို့ဆုို ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနုိုင်ငံတော်ဆုိုတာဟာ နုိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်မှန်း လူအတော်များများက မေ့နေကြပါတယ်။ နုိုင်ငံတော်လုို့ ကြားလုိုက်တာနဲ့ ဒါဟာ ငါတုို့နုိုင်မဆုိုင်ဘူး။ အစိုးရ၀န်ကြီးတွေ၊ စစ်ဗုိုလ်တွေနဲ့သာဆုိုင်တဲ့အဆင့်ဆုိုပြီး လူများစုက ယူဆလာတဲ့အထိ အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီမှုက ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ကြီးနဲ့ စစ်ဗုိုလ်တွေကို ရေမြေ့သခင် ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် အမြင်မှားလာခဲ့တာ နှစ်တွေ ဘယ်နည်းတော့မလဲ။
အရင် မဆလ၊ န၀တ၊ စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဒီလုိုဝါဒဖြန့်ခဲ့တာကုို ထားလုိုက်ပါတော့။ အပြစ်ပေး အရေးယူတာလည်း မလုပ်ပါနဲ့တော့။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ကနေ ရှေ့ကိုချီတက်မဲ့ခရီးမှာတော့ အရင်ခေတ်က မှားယွင်းစွာ ၀ါဒဖြန်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ရုတ်သိမ်းပေးဖုို့လုိုပါတယ်။ ၀န်ကြီးနဲ့ စစ်ဗုိုလ်က နုိုင်ငံတော်ရဲ့ ရေမြေ့ သခင်ကျေးဇူးရှင်တွေ မဟုတ်ပါ။ နုိုင်ငံတော်ဆုိုတာဟာ နုိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အတွက် တကယ့်ရေမြေသခင်ကျေးဇူးရှင်ဟာ သန်း ၅၀ ကျော်သော နုိုင်ငံသားတွေသာဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြ လုိုက်ရပါတယ်။ ။